‘शान्तिबिना समृद्धि असम्भव’ - अचानक - नेपाल
‘शान्तिबिना समृद्धि असम्भव’
विश्व शान्तिका लागि नेपालले पनि काम गरिरहेको छ भन्ने सन्देश दिनु जरुरी छ ।
लुम्बिनी र आसपास क्षेत्रमा शान्ति र सामाजिक काममा तीन दशकदेखि सक्रिय भिक्षु मैत्री महास्थवीर, ६३, अखिल नेपाल भिक्षु महासंघका अध्यक्ष हुन् । बुद्धस्थलवरिपरि विपन्न वर्गलाई नि:शुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य र स्वच्छ खानेपानी दिन अहोरात्र खटिइरन्छन्, उनी । १४ वर्षको उमेरमा भिक्षु भएका उनी नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन, लुम्बिनी, कपिलवस्तु र नवलपरासीका बुद्धस्थलको प्रचारप्रसार र विकासमा निरन्तर सक्रिय छन् ।
श्रीलंका सरकारद्वारा ११–१५ मेमा मनाइएको ‘वैशाख’ नामक पाँचदिने अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलनमा नेपालले सहभागिता जनायो । श्रीलंका सरकारले पहिलो पटक मनाएको ‘१४औँ युनाइटेड नेसन्स डे अफ वैशाख’मा केन्द्रित रहेर सहभागी अगुवा महास्थवीरसँग गरिएको कुराकानी :
‘वैशाख’ कस्तो कार्यक्रम रहेछ ?
विश्वमा अहिंसा बढेका बेला शान्तिका लागि ऊर्जा दिन आयोजित थियो यो सम्मेलन । नेपालमा जन्मेका गौतम बुद्धको जन्म, ज्ञानप्राप्ति र मृत्यु (महापरिनिर्वाण)को स्मरण गर्दै श्रीलंका सरकारले यस वर्ष बुद्धजयन्ती संयुक्त राष्ट्रसंघीय दिवसका रूपमा मनाएको हो ।
यो सम्मेलनको सार के रह्यो ?
संसारमा अहिले आतंकवाद र हिंसा, लागूऔषध बेचबिखन र ओसारपसारजस्ता गलत कामले प्रश्रय पाइरहेका छन् । युवापुस्ताको भविष्य अन्धकारतिर जान थालेको देखेर गौतम बुद्धको शान्ति शिक्षा अपरिहार्य भएकाले कार्यक्रम गरिएको हो । अझ पनि एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार गरी समाजमा शान्ति, सद्भाव, प्रेम र करुणाको भावना ल्याउन जरुरी छ भन्ने नै यसको सार हो ।
यो सम्मेलनबाट नेपाललाई के लाभ भयो ?
संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता दिएको ‘युनाइटेड नेसन्स डे अफ वैशाख’ कार्यक्रम नेपालका लागि राम्रो प्रचार माध्यम बन्यो । उद्घाटन कार्यक्रममा ७२ राष्ट्रका सात सयभन्दा बढी प्रतिनिधिबीच बुद्धजन्म स्थल नेपाल हो भन्ने सन्देश गयो । आयोजक राष्ट्र श्रीलंकाका बुद्ध शासन मन्त्री विजयदाशा राजापाक्षेले उद्घाटन कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीकै सामुन्ने ‘बुद्ध वाज वर्न इन नेपाल’ भनेर भाषण गरे । श्रीलंकाप्रति नेपाल आभारी हुनुपर्छ ।
कार्यक्रममा नेपालका राष्ट्रपति र भारतका प्रधानमन्त्री दुवैलाई किन बोलाइएको रहेछ ?
बुद्धको सन्दर्भमा नेपाल र भारत दुवैलाई सम्झिनैपर्छ । बुद्ध नेपालमा जन्मिए र भारतमा ज्ञान प्राप्त गरे । उतै पहिलो प्रवचन दिए अनि महापरिनिर्वाण प्राप्त गरे । बुद्धसँग सम्बन्धित दुवै मुलुकका प्रमुखलाई बोलाएर कार्यक्रम गर्नुपर्छ भन्ने लागेर श्रीलंका सरकारले नेपाली राष्ट्रपति र भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएको होला ।
बुद्घ जन्मथलोमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन कति आवश्यक छ ?
नेपालले पनि यस्तै सम्मेलन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बुद्धस्थल र मुलुकलाई चिनाउनुपर्छ । बुद्धस्थलको विकास र संरक्षण गर्न यस्ता सभा–सम्मेलन प्रभावकारी हुन्छ । यसले मुलुकको पर्यटनमा पनि टेवा पुग्छ । विश्व शान्तिका लागि नेपालले पनि काम गरिरहेको छ भन्ने सन्देश दिनु जरुरी छ ।
समाजलाई शान्ति र समृद्घितिर लाने सूत्र के हुन सक्छ ?
युवा र किशोरकिशोरीलाई अवैध लागूऔषध/मद्यपान सेवन र दुव्र्यसनबाट बचाउनुपर्छ । सभ्य समाज निर्माण गर्नुपर्ने तथा धनसम्पत्ति जोड्नुभन्दा शान्ति र सद् भावको शिक्षा फैलाउनुपर्छ । सबै मिलेर सहअस्तित्व कायम गरेर जीवनयापनका लागि राम्रो वातावरण बनाउनुपर्छ । शान्तिबिना
व्यक्ति, परिवार, समाज र मुलुकको समृद्घि सम्भव नै छैन ।